အဝါရောင် ဖျော့ဖျော့ရှိသည့် ပရာဆီယိုဒိုင်မီယမ် (Praseodymium) (ဓာတုသင်္ကေတမှာ-Pr) ဖြစ်သည်။ ပျော့ပြောင်းပြီး ပုံသွင်းရ လွယ်ကူသော သတ္တုတစ်မျိုး ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းသည် Lanthanide အုပ်စုထဲတွင် ပါဝင်သော ဒြပ်စင် တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အောက်ဆီဂျင်နှင့် နှေးကွေးစွာ ဓာတ်ပြုပါသည်။ လေထုနှင့်ထိတွေ့ စေသောအခါတွင် ပရာဆီယိုဒိုင်မီယမ် (Praseodymium) ကိုထပ်မံ ဓာတ်တိုးစေနိုင်သော အစိမ်းရောင် အောက်ဆိုဒ် ဖြစ်သွားပါသည်။ ၎င်းဒြပ်စင်သည် အခြားသော ကမ္ဘာ့ရှားပါး ဒြပ်စင်များထက် ပွတ်တိုက် ထိခိုက်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိသော်လည်း ဆီဖြင့်သော်လည်းကောင်း ပလပ်စတစ် ဖုံးအုပ်၍ သော်လည်းကောင်း သိုလောင်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။ အကြောင်းမှာ ရေနှင့် လျှင်မြန်စွာ ဓာတ်ပြုလွယ်သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
Most stable isotopes of ပရာဆီယိုဒိုင်ယမ်
ပရာဆီယိုဒိုင်မီယမ် (Praseodymium) ကို အဓိက အသုံးပြုမှုမှာ စီးကရက်မီးခြစ်များတွင် မီးခြစ်ကျောက်အဖြစ် အသုံးပြုပါသည်။ Pr ဓာတ်ပေါင်းက အမျိုးမျိုး ကွဲပြားစွာ အသုံပြုကြပါသည်။ ပရာဆီယိုဒိုင်မီယမ် (Praseodymium) အောက်ဆိုဒ် ကို arc မီးချောင်းများရှိ ကာဗွန် Electrodes (လျှပ်တိုင်) များတွင် အသုံးပြုပါသည်။ ၎င်း အောက်ဆိုဒ် သည် ဖန်သားကို လှပသော အဝါရောင် ပေးစွမ်းနိုင်စွမ်း ရှိပါသည်။ ပရာဆီယိုဒိုင်မီယမ် (Praseodymium) ပါဝင်သော ဖန်သားသည် အနီအောက်ရောင်ခြည်ကို တားဆီးနိုင်စွမ်းရှိ သည့်အတွက် ဂဟေဆော်ရာတွင် မျက်ကာမှန်အဖြစ်လည်း အသုံးပြုပါသည်။ Pr ဆားများသည် ကြွေရည်များ နှင် ဖန်များကို အရောင် ဆိုးရန်အတွက်အသုံးပြုပါသည်။
ပရာဆီယိုဒိုင်မီယမ်(Praseodymium) ကို ပိုမို ခိုင်ခံစေရန်အတွက် Mg နှင့် ရောစပ်၍ သတ္တုစပ် အဖြစ် လေယာဉ် အင်ဂျင် အစိတ် အပိုင်းများတွင် အသုံးပြုပါသည်။ Pr သည် အိမ်သုံး ပစ္စည်းများဖြစ်သည့် ရောင်စုံ ရုပ်မြင်သံကြားစက်များ၊ မီးချောင်းများ၊ စွမ်းအင် ချွေတာရေး မီးချောင်းများနှင့် ဖန်ထည်ပစ္စည်းများတွင် တွေ့ရှိနိုင်သည့် ရှားပါသော ဓာတု ဒြပ်စင်တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ အားလုံးသော ရှားပါး ဒြပ်စင်များတွင် ကွဲပြားသော ဂုဏ်သတ္တိများရှိကြသည်။ Pr သည် ဓာတ်ကူ ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်ရန် အသုံးဝင်ခြင်းနှင့် ဖန်ထည်များ အရောင်တင်ရာတွင် အသုံးဝင်မှုတို့ကြောင့် ယ္ခုထက်ထိ ၎င်းကို အသုံးပြုမှုသည် ဆက်လက် တိုးမြှင့် အသုံးပြု နေကြဆဲ ဖြစ်သည်။
Pr သည်ရှားပါး ဒြပ်စင်များထဲမှ ပို၍ များများ တွေ့ရသော ဒြပ်စင် အမျိုးအစား တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းပမာဏသည် သံဖြူထက် လေးဆ ပို၍များသည်။ Pr ကိုများသောအားဖြင့် အသွင်ကွဲ သတ္တုရိုင်း နှစ်မျိုး၌သာ တွေ့ရသည်။ Pr ကို တွေ့ရှိရသော အဓိက သတ္တုရိုင်း နှစ်မျိုးမှာ Monazite နဲ့ Bastnasite တို့ပဲဖြစ်ကြပါသည်။ အဓိက ထွက်ရှိသော သတ္တုတွင်း နေရာများမှာ တရုတ်၊ အမေရိကန်၊ ဘရာဇီး၊ အိန္ဒိယ၊ သီရိလင်္ကာ နှင့် ဩစတြေးလျ တို့ဖြစ်ကြပါသည်။ ထုတ်ယူသန်စင်ပြီး ပမာဏမှာ တန်ပေါင်း ၂ သန်း ဝန်းကျင်နီးပါးရှိပါသည်။ ကမ္ဘာ့ ထုတ်လုပ် သန့်စင်မှုနှုန်း ပမာဏမှာ တစ်နှစ်လျှင်၂၅၀၀ တန် ရှိပါသည်။
အားလုံးသော ရှားပါ သတ္တု တွေကဲ့သို့ပင် Pr သည် အဆိပ် အတောက် ဖြစ်နိုင်မှု နိမ့်ကျပါသည်။ ပျော်ဝင်နိုင်သော Pr ဆားများသည် ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း အဆိပ်အတောက် ဖြစ်စေမှု နည်းပါသည်။ မပျော်ဝင်နိုင်သော ဆားများသည် အဆိပ်အတောက် မဖြစ်နိုင်ပါ။ အဆိပ်တောက်ဖြစ်သော အခါ အရေပြားနှင့် မျက်လုံးတို့ကို နာကျင်ကျိန်းစပ် စေပါသည်။ Pr အသုံးပြုသော အလုပ်ခွင် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် လူကို အများဆုံး အန္တရာယ် ဖြစ်စေပါသည်။ ၎င်းအစိုဓာတ် နှင့် ဓာတ်ငွေ့များသည် လေနှင့်အတူ အသက်ရှူ လမ်းကြောင်းအတွင်း ဝင်လာနိုင်ပြီး အဆုတ်ကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါသည်။ အချိန်ကြာရှည်စွာ ရှူရှိုက်မိလေ ပိုမို ဆိုးရွားလေဖြစ်သည်။ Pr သည် လူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း စုဆောင်းမိသောအခါ အသည်းကို အန္တရယ် ပိုမိုပေးနိုင်သည်။
Pr သည် ပတ်ဝန်းကျင်၏ များစွာသော နေရာများတွင် ပျံ့နှံနေတတ်ပါသည်။ အဓိကအားဖြင့် လောင်စာဆီ ထုတ်လုပ်သော စက်ရုံများမှ စွန့်ပစ် ပစ္စည်းများကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ Pr ပါဝင်သော အိမ်သုံး ပစ္စည်းများ ကို စွန့်ပစ်ခြင်းမှလည်း ပတ်ဝန်းကျင်သို့ Pr ရောက်လာနိုင်ပါသေးသည်။ Pr သည် ကုန်းတွင်းနှင့် ရေအောက်ပိုင်းမြေဆီလွှာများတွင် ဖြည်းဖြည်းချင်းစုပုံနေပြီး ၎င်းမှတစ်ဆင့် လူ၊ တိရိစ္ဆာန်နှင့်သဘာဝမြေဆီများတွင် ပါဝင်မှု တိုးပွားလာပါသည်။ မျိုးပွါးမှုနှင့် အာရုံကြော စနစ် လုပ်ဆောင်မှုအပေါ်ကို ပျက်စီးစေသော ရေသတ္တဝါများ၏ ဆဲလ် အမြှေးပါးတွေကို Pr က ပျက်စီးစေပါသည်။
"praseodymium"၊ Oxford English Dictionary (3rd ed.)၊ Oxford University Press၊ September 2005 မရေရာသော |mode=CS1 (အကူအညီ) (Subscription or UK public library membership required.)
Jackson, M. (2000). "Magnetism of Rare Earth". The IRM quarterly 10 (3).